भातमारा अरिङगालहरुले, रबि लामिछानेकाे किन विरोध गर्छाैं - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
भातमारा अरिङगालहरुले, रबि लामिछानेकाे किन विरोध गर्छाैं
२०७५ चैत्र ८ गते शुक्रवार
सपना कति बाँडेयाै, लेखाजोखा छ? सपनामै सिमित बनाई ठुला-ठुला महलहरु कब्जा गरेर गरीब नेपाली जनताहरुलाई थाङनामा सुतायाै।
धनयुद्धका प्रमुख कमरेड प्रचण्ड – गरिब नेपाली जनतालाई भड्काएर सत्र हजारकाे ज्यान लियाै। अाखिर जनताले के पाए, तिमिले त कराेडाै, विदेशमा थुपारेका छाैँ।
महलहरु र लुटेको कालो धनको मालिक आफै बनायाैँ। खै के पाए युद्धकाे मोर्चामा लडेका अबोध बालबालिका देखि हजारौं युवा गरिब नेपालीले : मेरो प्रश्न?
उबेलअ बिदेशीको ईसारामा परिवर्तनको नाम लिदै बर्गिय युद्धकाे नाममा: कि-त धन कि-त जन भन्दै, जबर जस्ती घरबाट थुतेर लगेको याद अाउदैन। जनताका छोराछोरीलाई अग्रगामी छलाङ्गकाे नारामा झुपडीबाट उठाएर कयौं लडाइँमा भिडायाै, मरायाै।
ती सहिद परिवार र अंग भंग भएका महान नेपाली नागरिकले अहिले पनि कामरेड प्रचण्डलाई साेध्ने प्रश्न हाे, कमरेड किन बाटाे बिरानुभयाे? कहिलै जवाफ दिने हिम्मत गरियाे। ज्यान गुमाएका परिवारजनले के पाए? सिन्दुर पुछिएकाले के पाए? टुहुरा बनाईएका ति अबोध, अनाथ बालबालिकाहरुले के पाए? के पाए ती घाइतेले?
तपाईं त अाज, पखाला र टाउको दुखे थाईल्याण्ड, सिंगापुर र अमेरिका धाउनुपर्ने कस्तो बाध्यता अाईलाग्याे। नेपाली उखानमा भनेझै “जसले स्याल दरबार पुर्‍याे : तिनिहरुले नै बिष खाईरहेका छन, भयाे। के यसैका लागि थियाे, दस बर्षे हिंसात्मक युद्ध?
भ्रष्ट , माफिया र खुफियाले चलाएको देशमा यदि साँच्चै विधि र न्यायको शासन चलाउने हो भने जननेता मदन भण्डारीको हत्यारा र राजा बीरेन्द्रको बंश नाश गर्ने कमिनाहरु पत्ता लाएर जेल कोच्नु पर्छ। त्यो जेल जाने कमिनाहरुमा विधा भण्डारी, केपी ओली, प्रचण्ड ,शेरबहादुर र अरु थुप्रै पर्न सक्छन्। त्यसको लागि स्वतन्त्र नागरिकहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु आवश्यक छ। यदि कुनै माईकलालले मैले ल्याएको गणतन्त्रमा ठूलो कुरो गर्छस् भन्यो भने त्यसलाई सिधै भनिदिनु कि तैंले तेरो मात्र थुतुनो घुमाउनको लागि गणतन्त्रको बाँसुरी फुकेको होस् भने तेरो गणतन्त्र तैं लैजा र मारिएका १७ हजार गरिबका छोराछोरी उनीहरुको परिवारलाई जस्ताको तस्तै बुझाई दे! सक्छ अरे?
हिजो एउटा सच्चा नागरिकको पक्षमा आवाज उठाउँदा यहाँ कलमले नै रेटिएर धेरै गणेहरुले उत्ताना टाङ लाए। ति उत्ताना टाङ लाउनेहरु कुनै नाम चलेको नेता नभएर सब बाटामा कराउँदै हिड्ने बिबेकहिन पाल्तु चरा , मुसा र फ्याउराहरु थिए। यहाँबाट के स्पस्ट हुन्छ भने देशलाई खतरा ठूला भ्रष्ट नेताहरुबाट जति छ, त्यो भन्दा बढि यिनै पाल्तु कुकुर , अरिंगाल , धुपौरे र भरौटे हनुमानहरुबाट छ जो आफ्नो मालिकको चाकडीका लागि जुनसुकै हदसम्म पनि गिर्न तयार छन्। जबसम्म यस्ता नालायक ,कामचोर र एक भुँडी भात खान मालिककको जुत्ता बोक्ने भरिया कार्यकर्ता देशमा सल्बलाईरहन्छन्, तबसम्म भ्रष्ट नेताहरु जन्मेको जन्म्यै गरी रहन्छन् ।
तसर्थ सिधा कुरा जनता संङ्गको कार्यक्रमका संचालक रबि लामिछाने संङ्ग हाम्रो कुनै पनि झाले, माले, काले गोरु बेचेको साईनो सम्म पनि छैन। रबि लामिछानेज्युको नुनपानी खाएर घरमा चुलो पनि जलाएका छैनौं। केवल सत्यको साथ दिएको हो, मानब भएर जन्मे पछि दानवको ब्यबहार हामीबाट हुन सक्दैन। यसैमा हल्ला पनि छ, तिन करोड नेपालीको लोकपृय सिधा कुरा जनता संङ्गको कार्यक्रम केही दलका दलालहरु र तिनको नुनपानी खाने चाकडहरुले बन्द गर्ने प्रपंन्च बनाउदै छन् भन्ने हल्ला बजारमा सुरु भैसक्याे। आवाज विहिन रहरुको आवाज हो “सिधा कुरा जनता सँग” सत्य, तथ्य र प्रत्यक्ष! यसलाई बन्द गर्नु भनेको जनताको आवाजलाई दवाउनु हो। राज्यले यस्ता महान ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनीहरू माथि नै कार्बाहीको माग गर्नु कति सम्मको दमन र अत्याचार गर्नु हो। भ्रस्ट र गद्दार नेताको वरिपरि धुप बालेर भजन-कीर्तन गाउँने भक्त भेडाहरुको मुखमा लगाम लगाउन स्वतन्त्र नागरिकहरु जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार रहनु पर्छ। त्यसको लागि मत तयार छु,के तपाईहरु पनि तयार हुनुहुन्छ ??
पत्रकार रबि लामिछानेका लागि लेखिएको लेख हाे। लेख सम्पादित हाे। यसमा राम बाबू सेवानका समेत केही शब्द छन्।